ဂါဒီးယန်း သတင်းစာကြီးက The Lady ရုပ်ရှင်ကိုဝေဖန်လိုက်ခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Entertainment » ဂါဒီးယန်း သတင်းစာကြီးက The Lady ရုပ်ရှင်ကိုဝေဖန်လိုက်ခြင်း
ဂါဒီးယန်း သတင်းစာကြီးက The Lady ရုပ်ရှင်ကိုဝေဖန်လိုက်ခြင်း
Posted by နွယ်ပင် on Sep 16, 2011 in Entertainment, News, Opinions & Discussion |5comments
နောက် ၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှောင်းပိုင်းနှစ်တွေ…။
မြန်မာလူထုခေါင်းဆောင်ကိုလည်း အားနာပါရဲ့…။ တကယ်ကြည့်ပြီး တော့မှပဲ ဂါးဒီးယန်းသတင်းစာက ပြောတဲ့အတိုင်း ဟုတ်မဟုတ်၊ ကိုယ်တိုင် အကဲဖြတ်ကြပါတော့ဗျို့…။
ရည်ညွန်း — www.guardian.co.uk
မြန်မာပြည်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ မြန်မာလူထုခေါင်းဆောင် အမေစုအကြောင်းကို ရိုက်ပြထားတဲ့
ဇာတ်ကားဖြစ်လို့ The Lady ဇာတ်ကားကို အရမ်းကြည့်ချင်နေခဲ့တာပါ ….
အခုလို ဂါဒီးယန်း သတင်းစာကြီးက ဝေဖန်ပြလိုက်တော့ စိတ်ထဲ တစ်မျိုးတောင်ဖြစ်သွားတယ်
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မာပြည်ကို ဒီဇာတ်ကားရောက်လာရင်တော့ ကြည့်ဖြစ်အောင်ကို ကြည့်ရမယ် ….
တရားဝင်တော့ ကြည့်ခွင့်မရလောက်ဘူးထင်တယ်။ ရောက်တော့ ရောက်လာမှာပါ။
သူတို့ထောက်ပြတဲ့အချက်တွေလည်း ဂရုတစိုက်ကြည့်သွားမှာပါ (ကြည့်ခွင့်ရခဲ့ရင်)
အမေစုအကြောင်း ရိုက်ပြထားတဲ့ဇာတ်ကားက ဇာတ်ကားအရ၊ အနုပညာအရ ဘယ်လိုပဲချာတယ်ပြောပြော
အမေစုကို ဘာမှမထိခိုက်စေဘူးလို့ ယုံကြည်ပါကြောင်း…….။။။
(ကျွန်မကတော့ ထိုဝေဖန်မှု အမေစုနှင့် မသက်ဆိုင်)
အဲဒီကားလေး ကြည့်ကြည့်ချင်နေတာ.. ဘယ်လိုတွေလဲတောင် မသိဘူး။
ရွာသားကြီးတွေလည်း ကြည့်ပြီးရင် နည်းနည်း ဖောက်သည်ချပေးပါအုန်း။
အပိုင်ဝယ်ထားတဲ့ လူရှိရင်လည်း ကြည့်လို့ရအောင် ဟိုဟိုဒီဒီ တင်ပေးပြီး လင့်လေးပါလေး ရှဲပေးကြအုန်းနော်။
အရမ်းကြည့်ချင်ပါတယ် ဆိုမှနော်။လုပ်ချလိုက်ပီ ဂါးဒီရန်းကတော့။
အမှန်တော့ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုတွေမှာ ရှိစုမဲ့စု အင်အားလေးနဲ့ ရိုက်ရတာလေ။နောက်ပြီးတော့ အမေစုရဲ့ ဘဝသရုက်ကိုဖော်တဲ့နေရာမှာ ဟော်လီးဝုဒ်မှာ ဆုရဖို့ အတွက်ထက် ပြည်သူ့ အတွက် ပိုရည်ရွယ်ခဲ့လို့ နေမှာပါ။ဂါးဒီးရန်း သတင်းစာက သတင်းစာမို့ လို့ သူဝေဖန်ချင်သလိုဝေဖန်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ဒါပေမယ့် ကမ္ဘာမှာရှာပါး တဲ့ဒီလို အမေစုလို့ နိုဘယ်ဆုရှင်တစ်ယောက်ကို ကျွန်မတို့ တန်ဖိုးထားဂုဏ်ယူလျှက်ပါ။